यी हुन् विश्वकै च’र्चित बालक,६ वर्षको उमेरमै सि’क्स प्या’क… – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी हुन् विश्वकै च’र्चित बालक,६ वर्षको उमेरमै सि’क्स प्या’क…
आजकल मानिसहरु आफ्नो फिटनेसमा निकै ध्यान दिन्छन् । युवाहरुको बीचमा क’ठोर व्या’याम गरी सुग’ठित, स’सक्त तथा सि’क्स प्याकयुक्त श’रीर बनाउने लहड नै छ । प्रायः किशोरावस्थाको उत्तरार्ध तथा युवा उमेरमा तन्नेरीहरुले सिक्स प्याक तयार गर्छन् । तर ६ वर्षका बालकले सिक्स प्याकयुक्त जि’उ बनाएर सबैलाई तिनछक पारिदिएका छन् ।
इरानको बाबोल सहरमा जन्मिएका आरत होसैनी नामका ती बालक अहिले आफ्नो सि’क्सप्याक युक्त गठिलो स’रीरकै कारण चर्चित बनेका छन् । सुगठित शरीर मात्रै होइन उनी फुटबल र जिम्न्याष्टिक समेत राम्रो खेल्दछन् । इरानमा जनिमएका आरत अहिले बेलायतको लिभरपुलमा बस्दछन् । उनले हाल लिभरपुल एकेडेमीमै खेल तालिम लिइरहेका छन् । सोसल मिडियामा स्टार बनिसकेका आरतको इन्स्टाग्राममा ४० लाख फलोअर्स छन् । उनलाई चर्चित बनाउने श्रेय उनका बुवा मोहम्मदलाई जान्छ ।
उनले छोरालाई ९ महिनाको उमेरदेखि नै शा’रीरिक व्यायाम गराउन सुरु गरेका थिए । सुगठित शरीर र खेल कौशलका कारण ती बालक दुई वर्षको उमेरदेखि नै मिडियामा छाउन थालेका थिए। फुटबल खेलाडी समेत रहेका उनले भविष्यमा बार्सिलोना क्लबमा गएर खेल्ने सपना साँचेका छन् । कल्पना नगरुन् पनि किन ? उनका मनपर्ने खेलाडी नै लियोनेल मेसी हुन् । आफू पनि भविष्यमा मेसी जस्तै बन्ने सपना उनको छ ।
परिक्षामा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नको लागि प्रश्नको उत्तर यसरी लेख्ने गर्नुहोस=हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ ।
१. कुनै प्रश्नको लामो ब्याख्या नगर्ने, छोटो परिभाषा वा बर्णन गरिसकेको पछि बुदाँगत रूपमा लेख्न शुरू गर्ने । २. कुनैपनि प्रश्नमा सोधिएका विषयबस्तुको मुख्य केही हरफहरू लेखिसकेपछि बुँदाबाट लेख्ने । कुनै प्रश्नको सब टपिक बनाएर लेख्ने । ३ प्रश्नले मागे अनुसार, वर्ड फिगर, चार्ट वा टेबल बनाउने । ४. लामो ब्याख्या कुनैपनि प्रश्नमा नगर्ने । सकेसम्म प्रश्नको मुख्य विषयबस्तुलाई बुँदागत रूपमै लेख्ने ।
५. हिट अन द डेड शैली अपनाउने, कुरा नघुमाई जे सोधिएकै हो त्यसमा सिधै प्रवेश गर्ने । प्रश्न अनुसार हरेक उत्तर एउटा उदारण समेत प्रस्तुत गर्ने । ६. यदि परिचय, परिभाषा वा व्याख्या गर भनेको छ भने त्यो विषयसँग सम्बन्धित भनाईलाई कोटेशन गरी लख्ने । ७. लामो र गन्जागोल उत्तर लेख्न भन्दा उपयुक्त र गुणस्तरीय उत्तर लेखनमा जोड दिने ।